Intente yeJupiter / iPlanethi Glamping
Unquphantsi sinombuki zindwendwe onguPaulina
IPlanethi yeGlamping ngamava omlingo. Ekuseni uya kubuliswa kukuntyiloza kweentaka, kwaye ngorhatya uya kulaliswa kukuvakala kwehlathi. Senze indawo apho unokuyonwabela ngokupheleleyo izibonelelo zendalo. Umbono ovela ebhedini kwihlathi lepine, isibhakabhaka esizaliswe ziinkwenkwezi okanye i-clatter of raindrops kwi-dome - konke oku kuya kukwenza ukuba uphinde ulungelelane kunye noxolo lwangaphakathi.
IJupiter yeyona inkulu kwiintente zethu.
Indawo esijonge kuyo kwindawo ekuchithelwa kuyo iholide yePlaneta Zalesie iqinisekisa ulonwabo olukhulu kusapho lonke. Awusoze udikwe ngathi! Iplanethi yaseZalesie igubungela indawo yeehektare ezingama-50, kwaye intliziyo yeziko ngamachibi amabini, apho kukho iindawo ze-gastronomic kunye nemidlalo kunye nezixhobo zokuzonwabisa.